Western Strategy Game Yakaoma West 2 Vhura Beta Yakavhurika - Game Point - Bhodhi uye Vhidhiyo Mitambo
Yakatumirwa ne Andre Volkman | May 6, 2022 | nhau, Vhidhiyo mitambo
Akanaka Mufudzi Varaidzo uye Ice Code Mitambo yakazivisa kuti Hard West 2, iyo yemashura inoteedzana kune inotendeuka-yakavakirwa zano mutambo unotambwa nevanhu vanopfuura hafu yemiriyoni, yapinda yakavhurika beta kuburikidza neSteam paPC.
Iyo beta, iyo ichaita kusvika Chikumi 5, 2022, inoratidzira chidimbu chemushandirapamwe uzere wemutambo uye inoratidza humwe hwehunyanzvi huchawanwa nevatambi parwendo rwavo runonakidza kuburikidza neRima Mwoyo wekuMadokero.
Hard West 2: Bravado system yakawedzerwa kumutambo
Vavengi vanoparadzwa nehunyanzvi hunyanzvi seGin's Shadow Barrage - kurwisa kusingatarise chivharo uye kunogona kurova vazhinji vavengi. Wedzera kune iyo Flynn's Shadow Swap, iyo inoita kuti achinje nzvimbo neshamwari kana muvengi; Old Man Bill's Dead Man's Revenge, iyo inogona kurova chero munhu anoona uye zviyero zvinoenderana nekukuvara kwakatorwa; uye Kuseka Deer's Wild Run, iyo kukuvara kwayo kunowedzera kure kwairi kubva kune chinangwa.
Vatambi vanofanirwa kutora mukana werombo ravanenge vawana kubva mukukuvadzwa kana kushayikwa vanopikisa - izvi zvinogona kuwedzera mikana yekurova uye kushandura inonamira mamiriro kune mukana wako. Kana uchida, unogona kuwana hunyanzvi hutsva uye kupa mauto ako humwe hunyanzvi kana kuvandudza hunyanzvi huripo neiyo ghost deck.
Hard West 2 zvinhu:
Kukunda Rima Frontier: Kana muimbi wepasi rose Gin Carter akahwandira ane mukurumbira "ghost train" achitsvaga goridhe, anoona kuti iri kutambudzwa nadhiabhori pachake! Zvino Gin anofanira kutungamira boka revasinganzwisisike kuti vaponese mweya wake munyika inotongwa nerima. Vatambi vanoongorora marara akaomeswa nechando uye madhorobha asina mutemo emuganho weWild West muhondo yekurwisa vapenyu uye vasina kufa.
Iyo Bravado System: Kuuraya vanopikisa kunomutsa iyo itsva Bravado nyika uye inozadza yakashandiswa mapoinzi ekuita. Kungave kubva pabutiro, pane zvinogumbura kana neyakashongedzwa combo inouraya mumutsara - ani nani anobvisa munhu wese uye zvese zvinopfuura nemuWild West zvakanyanya.
Shootouts inofamba: Hard West 2's turn-based kurwa inoitika munzvimbo dzinochinja-chinja uye inochengeta uropi hwakabatikana sechinhu chinokonzeresa. Kubva pakudzingirirana nebhiza kusvika kuhumbavha hunonakidza hwechitima, sunungura fungidziro yako yekumadokero paunenge uchisundira zano rako kusvika kumagumo.
Simbisa zvisungo: Neasinganzwisisike ekutamba makadhi unogona kuvandudza maoko epoker enhengo dzechikwata. Simudzira nepfuti, zvinoputika, kana kungoita ammo uye whisky kuti munhu wese agare ari muchimiro chepamusoro.
Mutungamiriri Asingaoneki: Vatambi vari kutungamira boka rinokura revapanduki vane zvombo, varoyi uye zvimwe zvisinganzwisisike zvisikwa. Avo chete vanoita sarudzo dzakakodzera vanowana mamwe mapoinzi ekuvimbika uye vanogona kuwana hunyanzvi hutsva kune avo vari pedyo navo. Kuita sarudzo yakaipa, kune rumwe rutivi, inoedza kuzvipira kwako kune chikonzero chose.
Vakanaka, Vakaipa, uye Vasingafadzi: Wild West ngano dzechivanhu uye zvemashiripiti zvinosangana munyaya inotungamirwa nehunyanzvi yakataurwa nevatambi vezwi Kevin Conroy (Batman: Iyo Animated Series), Darien Sills-Evans (Mazuva Aenda) naAdam Gifford (Iyo Colony). Mumhanzi uyu wakahwina BAFTA Mubairo Jason Graves (Dead Space) uye nyaya yacho yakanyorwa pamwe chete neOrigins Award muhwina uye New York Times bestseller Matt Forbeck (Deadlands).
Hard West 2 inodarika yakatangira munzira dzese. Iyo itsva Bravado sisitimu inopa yakawedzera hukasha maitiro kune matekiniki uye kurwisa, inopa mubairo kuenda pane zvinogumbura kurebesa iyo Bravado streak uye dhishi kunze kwakawedzera kukuvadza. Chimwe chezvakanakisa kurwa kwepfuti pakufamba, kuine nhanho dzakasimba dzakaiswa munzvimbo dzinochinja kuti dzigadzire kunzwa kuzere kwekudzingirirana nemabhiza anomhanya-mhanya uye kuratidzira kunonakidza kwemakororo ezvitima.
Nintendo Chinja (OLED modhi) Ichena * 349,00 EUR tenga
Yakapedzisira kugadziridzwa pa20.05.2022/XNUMX/XNUMX / Affiliate Links / Mifananidzo kubva kuAmazon Product Advertising API. * = Affiliate links. Mifananidzo kubva kuAmazon PA API
Kare Nhau mumutambo wefoge: Radlands inotanga kuunganidza mari
Inotevera Zombie Mauto 4: MuDLC "Hondo Yakafa" yakananga kumagumo enyika
Mitambo yebhodhi paKickstarter: tanga idzi mishandirapamwe mitsva (vhiki 43)
Playtest: Kuparara kwaEthan Carter kweXbox One
Bardsung: Cooperative RPG bhodhi mutambo wakabudirira paKickstarter
Rocket League: Nyowani "Shamwari Yekuvandudza" yakaziviswa